RFID TM အလိုအလျောက် Card ကို, Touch ကိုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်, ပြန်ကြားရေး Button လေး, iButton, ခလရကဒ်, TM Card Watchs, TM Card Handles, ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းရေးရာပြန်ကြားရေး Button လေး
Keychain, စမတ်ကင်းလှည့်, လက်ပတ် / လက်ကောက် ခလရကဒ်, iButton, information button, ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းရေးရာပြန်ကြားရေး Button လေး, RFID TM အလိုအလျောက် Card ကို, TM အလိုအလျောက်ကဒ်လက်ကိုင်, TM card watchs, TM Smart Button, Touch Memory card
ပစ္စည်း: သံမဏိသို့မဟုတ်ဖျ Silicon (လက် catenary)
chip: အမေရိကန် Dallas encryption ကို, DS1990A-F5 အပါအဝင်, TM1990A-F5 နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်, i1990A.
ပျမ်းမျှပျက်ကွက်: ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကို 1/100,000 ကြိမ်
ထုတ်လုပ်သူ၏နံပါတ်စဉ်ကို: သာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 64bit အရေအတွက်က
System ကိုယုတ္တိဗေဒ: 64နည်းနည်း password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
သိုလှောင်ခြင်း: 8ဋ-bits RAM နဲ့
Card ကိုဖတ်ပြီးသား: ထိတွေ့အမျိုးအစား
အင်္ဂါရပ်တွေကိုဖတ်ပါနှင့်စာရေး: ရေးကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့် encrypt လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
R / W ကိုကြိမ်: > 1.5 ဘီလီယံကိုကြိမ်
အလုပ်အပူချိန်: -40℃ ~ + 85 ℃
ကြိမ် Read: > 350,000 ကြိမ်
ဝန်ဆောင်မှုဘဝ: > 20 နှစ်ပေါင်း
chip ရှုထောင်: Φ16.25mm× 5.89mm
TM အလိုအလျောက်ကဒ်, also known as iButton (information button), is an abbreviation of Touch Memory, and some also called iB card. It isakind of smart card with metal shell package, which is called the most solid smart card in the world.
TM (Touch Memory) ကဒ် (commonly known as buttons card) is the United States DALLAS company's patented product, which uses single-protocol communication, instantaneous touch to complete the data read and write, both with non-contact IC card ease of operation, But also has the contactless IC card's low cost, is one of the most cost-effective IC card.
Password capacity of 280 trillion, door locks mutual opening rate of zero; It can be embedded in the PVC card, extremely easy to carry, ကြာရှည်ခံသော; Touch operation, free of high-frequency electromagnetic interference;
Intelligent apartment building, intelligent patrol, postal, railway, fire control, လျှပ်စစ်မီး, cable television, chemical industry, oil field and other inspection system, ဟိုတယ်များ, swimming pool, school dormitory meters and water meter, TM lock, TM Water meter, TM power meter, TM gas meter, biological recognition and tracking system, logistic system, identification system, Smart Patrol System, Induction Guard System, electronic purse, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product RFID TM Card, iButton, ခလရကဒ်, ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းရေးရာပြန်ကြားရေး Button လေး
prev: TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေး Button လေး, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်တည်နေရာ Button လေး
နောက်တစ်ခု: YXE300 စမတ်ကင်းလှည့် Stick, induction စောင့်တပ်ဖွဲ့ခရီးစဉ် Stick